April 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
တစ်နေရာကို စွန့်ခွာဖို့ သတ္တိရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက် လောကကြီးဟာ တစ်နေရာမှာ တံခါးတစ်ချပ် အမြဲထပ်ဖွင့် ထားပေးတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေကို ရွေးပြီးတွေးနေမှတော့ စိတ်ညစ်မှာပေါ့ ပျော်စရာတွေလည်း တွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘ၀တစ်ခုမှာ …. အတုလုပ်ယူလို့မရတာ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သမိုင်းပဲ။ တစ်ရက်… ၂၄ နာရီဆိုတဲ့ အချိန်က သာမာန်တွေးရင် ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ နတ်ရှိုင်းစွာ တွေးကြည့်.. မင်းဘ၀ကို ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ထောင်သောင်းမက ပါဝင်နေတယ်…။ လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို လိုချင်ရင် လူတိုင်းမှာ မရှိနိုင်တဲ့ အားထားထုတ်မှုတော့လိုအပ်တယ်။ ဘ၀ဆိုတာ သကြားနယ်ထာတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် မဟုတ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေ ခါးတယ် မိတ်ဆွေ ခါးတယ် စိတ်ဓါတ်ကျနေရင် မိတ်ဆွေမှားမယ်။ လှပနေတဲ့ ဘ၀ကိုပဲ မင်းကကြည့်နေတော့ မင်းဘ၀ကြီး မလှပဘူးလို့ […]
Posted in: QuotesLeaveacommentMM Book City	 30/04/2018
“လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစေသော အတွေးအမြင် စကားလုံးများ”
၁။ သင်ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ မှာ၊ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ တန်ဖိုးမရှိတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ နောက်လူတစ်ဦးရဲ့ ရှေ့ မှာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာသဖွယ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိမိတန်ဖိုးရှိရာ ကို သိပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာမှာပဲ ရပ်တည်မယ်။ ၂။ စိတ်ပျက်စရာမကောင်းဆုံးနဲ့ မတန်ဆုံး “ အလွမ်း” ဆိုတာ၊ တစ်ဘက်သားက မင်းလွမ်းနေတာကို မသိလို့ မဟုတ်ပါ။ သိရဲ့ သားနဲ့ အရေးမစိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ မင်းသူ့အပေါ် ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း၊ သူဂရုမစိုက်ပါဘူး၊ သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မင်းအတွက် နေရာပေးမထားလို့ပါ။ ၃။ တကယ်လို့ အဆုံးဆုံး အခြေအနေဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ “ No ” ဆိုတဲ့ ငြင်းဆိုခြင်း အဆင့်ပဲ ရှိမယ်ဆိုရင်၊ သတ္တိမွေးပြီး သင်စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ ၄။ […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 29/04/2018
သား နှင့် ကား
လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ကားအသစ်ကို ပေါလစ်တိုက်နေတယ် အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်သားလေးဟာ ကျောက်ခဲနဲ့ ကားရဲ့ဘေးခြမ်းမှာ ခြစ်လိုက်တယ်။ သူတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီ သူ့သားရဲ့ လက်ကိုဂွနဲ့ သတိမထားမိပဲ အချက်ပေါင်းများ စွာ ထုရိုက်မိသွားတယ် ဆေးရုံးရောက်တော့သားလေးရဲ့ လက်ချောင်လေးတွေဟာ ကျိုးကြေကုန်လို့မတတ်သာပဲအကုန်ဖြတ်လိုက်ရရှာတယ် ဖခင်ကိုတွေ့တော့ နာကျည်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ “ဖေဖေသားရဲ့လက်ချောင်းတွေ ပြန်ပေါက်လာဦးပါ့မလား”လို့ မေးရှာတယ် ဖခင်ဟာ အရမ်းခံစားသွားရပြီး ပြောစရာစကားတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ် ဒါနဲ့သူ့ကားဆီကိုပြန်သွားပြီး သူ့ရဲ့ ကားအသစ်ကိုအချက်ပေါင်းများစွာကန်တယ် မောပန်းပြီး ကားအနားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း သူ့ ရဲ့သားငယ်ခြစ်ထားတဲ့ ခဲခြစ်ရာကို ကြည့်မိတယ်။ အဲဒီမှာ ရေးထားတာက…. “ဖေဖေကိုချစ်တယ်”တဲ့။ ။ သူဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ပဲနောက်တစ်နေ့ မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်လိုက်တယ် ဒေါသနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ့ အကန့် အသတ်ဆိုတာမရှိဘူး […]
ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ ရေသားသည် (၁) ဆရာမင်းလူရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း စာအုပ် ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ငယ်ငယ်က မပြည့်မစုံ နေခဲ့ရပေမယ့် စီးပွါးရေးအကွက်မြင်၊ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်၊ Street smart ဖြစ်ခဲ့လို့ တဖြည်းဖြည်း ချမ်းသာလာတဲ့ သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပါ။ တစ်ခါက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ ကျောင်းလစ်ပြီး ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျောင်းက ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာတွေ့ပါလေရော။ တွေ့တော့ သူက လန့်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့သူငယ်ချင်းက ခပ်အေးအေးပဲ ပြောတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့၊ ဆရာတောင် ဘောလုံးပွဲလာကြည့်နေမှတော့ ငါတို့ကို သူဘယ်လိုတိုင်မလဲ တဲ့။ တစ်ဖက်သားရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကိုင်ထားတတ်တဲ့ သူ့အကျင့်စရိုက်ကို ဒီငယ်ဘ၀အဖြစ်အပျက်လေးကတစ်ဆင့် ဆရာမင်းလူက ပုံဖော်ထားပါတယ်။ (၂) စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကလေးဘ၀က ကျက်ရတဲ့ ရူပဗေဒဖော်မြူလာလေးနဲ့ ဖြေဖျောက်ကြည့်ပါ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ် […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentbloggerak	 29/04/2018
၁။ ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့၏ ထူးခြားချက်မှာ (ဗျာဒိတ်, ဖွားမြင်, ဗောဓိပင်, စံဝင် နိဗ္ဗာန်နန်း) ဆိုသည်နှင့်အညီ သုံးလောကထွတ်ထား သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနှင့်စပ်၍- ဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ ဘုရားဖြစ်တော်မူသောနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ ဤထူးခြားချက်လေးမျိုးတို့နှင့် တိုက်ဆိုက်နေပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ထူးခြားချက်လေးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဤနေ့ကို `ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့´ ဟု အမွှမ်းတင် ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ၂။ ဤကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် မာရ်နတ်ရန်ကို အောင်မြင်တော်မူသောကြောင့် ဤနေ့ဤရက်ကို `ကဆုန်လပြည့် မာရ်အောင်နေ့´အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ စိတ်အစဉ်တွင် စွဲမြဲ၍နေကြပါသည်။ ၃။ ဝိသာခါနက္ခတ်နှင့်ယှဉ်၍ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းများကို အကြောင်းပြု၍ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို `ဝိဆခ်ဒေး´ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ဝိသာခါဒေးဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဘုရားဖြစ်သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ကို အာရုံပြု၍ […]
Posted in: Featured, ဆောင်းပါးTagged: ကဆုန်လပြည့်Leaveacommentbloggerak	 29/04/2018
သမင်မကြီးဟာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနဲ့ မွေးခါနီး ဖွားခါနီး ယာတောစပ်က မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကလေးမွေးတော့အံ့ဆဲဆဲ အချိန်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာချတယ်။ မိုးနဲ့အတူ မုန်တိုင်းပါ ပါလာတဲ့အတွက် ကောင်းကင် တစ်ခွင်ဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် မဲမှောင်ပြီး လျှပ်စီးတွေ လက်နေတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် မြစ်ရေပြင်ဟာလည်း တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ကြမ်းသထက် ကြမ်းလာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ယာတောထဲကို မိုးကြိုးပစ်ချ လိုက်တဲ့အခါ ယာတောခင်းကြီး ဟာလည်း မီးထလောင်တယ်။ သမင်မကြီးရဲ့အနောက်မှာတော့ မုဆိုးတစ်ယောက်ဟာ မြှားနဲ့ ပစ်ဖို့ ချိန်ထားလိုက်ပြီ။ အရှေ့မှာလည်း ကျားတစ်ကောင်ဟာ သမင်မကြီးကို ခုန်အုပ်ဖို့ပြင်နေပြီ။ ကဲ… သမင်မကြီး ဘာလုပ်မယ် ထင်သလဲ။ အရှေ့မှာကျား၊ အနောက်မှာ မုဆိုး၊ တောင်မှာ မီး၊ မြောက်မှာ ရေ၊ မိုးပေါ်မော့ကြည့်ရင် လျှပ်စီးတွေနဲ့ အောက်မှာ […]
Posted in: ပုံပြင်LeaveacommentMM Book City	 28/04/2018
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ကိုဒီးဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကိုဒီးဟာ ခရီးသွားရင်း မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး လမ်းစရိတ်တွေပြတ်ကာ အစာရေစာကလည်း မစားရနဲ့ အဝတ်အစားတွေကလည်း စုတ်ပြတ် ညစ်ပေနေတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့ “ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာ” ဆိုသလို ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ နီးစပ်ရာ ရွာလေးတွေဆီ တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် စားစရာလိုက်တောင်း တော့တယ်။ “ကျွန်တော့်ကို စားစရာလေး နည်းနည်း လောက်ကျွေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် ခရီးသွားရင်း လမ်းစရိတ်ပြတ်လာလို့ပါ ” လူတွေက သူရဲ့ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ကြည့်ပြီး ဒီလူ အရူးပဲလို့ ထင်ခဲ့ ကြတော့တယ်။ တစ်အိမ်ကဆို သူ့ကို “ဝေးဝေး သွားစမ်း”လို့ အော်ဟစ်ပြီး မောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့လုံး ကိုဒီးတစ်ယောက် ဘာကိုမှ မစားရဘူး။ နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ […]
အထီးကျန်တာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး အထီးကျန်တာကို အကြောင်းပြပြီး ဘာမှမလုပ်ချင်ရင်တော့ မင်း အကျည်းတန်သွားလိမ့်မယ် ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပေးဆပ်ခြင်းတွေရှိနေလိမ့်မယ်။ ( Van Damme ) ချိုတဲ့တာ မပြည့်စုံတာ ကအပြစ်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပျက် နေတာက သာအပြစ်တစ်ခုပါ။ ( Tom Hanks ) အလုပ်တစ်ခုက မခက်ခဲဘူးဆိုရင် လူတိုင်း လိုက်လုပ်နေမှာပေါ့၊ အခက်အခဲက လူတွေကို အဆင့်မြင့်သွားစေတာပါပဲ။ ( Tom Hanks ) ကိုယ့် မိသားစုကို သိမ်ငယ်ခြင်းက လောကမှာအောက်တန်းအကျဆုံးစိတ်ပဲ။ ( Tom Hanks ) ပြင်လို့ မရတဲ့ အတိတ်တွေထဲ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးသူ တွေကို ဂရုမစိုက်မိခဲ့တဲ့ အတိတ်ကအဆိုးဆုံးပဲ၊ ဒါကြောင့် […]
Posted in: QuotesLeaveacommentMM Book City	 28/04/2018
(၁) အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်မှု ဂျပန်တွေဟာ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်တဲ့နေရာမှာယောက်မရှိဘူးပြော ရလောက်အောင်ကို အလုပ်လုပ်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ လျှို့ဝှက်ချက် မရှိပါဘူး။ ဂျပန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ တစ်နှစ်ကို အလုပ်လုပ်ချိန်နာရီပေါင်းဟာ (၂၄၅၀)နာရီဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာမှာ အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ (၁၉၅၇) နာရီ၊ အင်္ဂလန်ရဲ့ (၁၉၁၁) နာရီ၊ ဂျာမဏီတွေရဲ့ (၁၈၇၀)နာရီ နဲ့ ပြင်သစ်တွေရဲ့ (၁၆၈၀)နာရီတွေထက် များစွာကျော်လွန်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နှုန်းစံတွေအရ အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ ကားတစ်စီးတည်ဆောက်ဖို့ (၄၇)ရက်လောက် လိုအပ်ပါတယ်။ ဂျပန်အလုပ်သမားတွေကတော့ ကားတစ်စီးကို (၉)ရက်နဲ့ အပြီးတည်ဆောက်နိုင်ကြတယ်။ ဒီစစ်တမ်းအရ ဂျပန်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်အားဟာ ကျန်နိုင်ငံတွေက အလုပ်သမား (၅)ယောက်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ညီတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ (၂) အရှက်တရားကြီးခြင်း အရှက်တရားကြီးခြင်းဟာ မိရိုးဖလာအရရော၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရပါ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 27/04/2018
” ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတာကို လျော့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားစိတ်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ “
၁။ မနှစ်သက်တာကို အားနာပြီး ခေါင်းညိတ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ မနှစ်သက်တာကို အားနာမနေဘဲ ခေါင်းခါရဲတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတာပါ။ ၂။ လူတိုင်းသဘောကျတာကို လိုချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ သူများသဘောကျဖို့ထက် ကိုယ်လိုချင်တာကိုကောင်းစွာသိတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတာပါ။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္ထဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၃။ အားလုံးက ကိုယ့်ထက်ကံကောင်းတယ်ထင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ သူများကိုအားကျဖို့ထက် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာ ပါ။ ၄။ နုပျိုကြည့်ကောင်းတာချည်းပဲ လိုချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကို ကိုယ်ချစ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတာပါ။ ၅။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာကြောက်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူဖို့ မကြောက်တတ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတာပါ။ ၆။ အနိုင်ယူသမျှကို သည်းခံခွင့်ပြုဖို့အဆင်သင့်ရှိတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုအားနည်းတာပါ။ မမျှတတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကို […]
Posted in: FeaturedLeaveacommentMM Book City	 27/04/2018